Ny fitsangatsanganana an-habakabaka amerikana dia hahasitrana tanteraka amin'ny fiandohan'ny 2022
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny fitsangatsanganana an-habakabaka amerikana dia hahasitrana tanteraka amin'ny fiandohan'ny 2022
Manantena ireo manam-pahaizana fa ny sasany amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia hanomboka hanova ny volan'ny cashflow ao anatin'ny volana maromaro
Manantena ny fitsangatsanganana fahavaratra ny mpanjifa
Maminany izao ny manam-pahaizana fa hahatratra ny fiarovana ny andian'omby i Etazonia amin'ny tapaky ny volana Jona ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay - telo ka hatramin'ny enim-bolana mialoha ny vinavinan'ny toetr'andro teo aloha
Ny fiverenana miverina amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny fomba haingana fanaovana vakisiny firenena
Ny fitsangatsanganana fialan-tsasatra any Amerika dia hanosika ny indostrian'ny zotram-piaramanidina amerikana ho amin'ny fanarenana COVID amin'ny fiandohan'ny 2022.
Herintaona lasa izay, mety ho nieritreritra ireo mpandinika indostria fa ny fanarenana an-trano tanteraka amin'ity fe-potoana ity ho an'i Etazonia dia saika tsy azo tanterahina, saingy ny fampifangaroana ny fangatahana mihombo, ny fanentanana ara-toekarena ary ny fahazoana vaksiny dia misy fiovana lehibe. Mbola aloha loatra ny miresaka momba ny fanarenana tanteraka ho an'ny indostria ankapobeny, saingy manantena ny manam-pahaizana fa hanomboka hitodika tsara ny cashflow ao anatin'ny volana maromaro, indrindra ny Etazonia.
Ny fampitomboana haingana ny vaksininy sy ny fanentanana ara-toekarena amin'ny $ 1.9 trillion Lalàna momba ny drafitra famonjena amerikana antony roa mahatonga ny fitomboan'ny fitsangatsanganana an-trano any Etazonia. Ireo tranga roa ireo dia sendra nifanindry tamin'ny fotoana nitrangan'ny lohataona tamin'ny fanjakana maro, izay niteraka fitomboan'ny fangatahana.
Ny mpanjifa koa dia miandrandra fitsangatsanganana amin'ny fahavaratra, ary manambara mialoha ny manam-pahaizana fa hahatratra ny fiarovana ny andian'ondry i Etazonia amin'ny tapaky ny volana Jona ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Jolay - telo ka hatramin'ny enim-bolana mialoha ny vinavinan'ny vinavina.
Tamin'ny tapaky ny volana martsa, ny fangatahan'ny dia amerikana dia nitombo maherin'ny 50 isan-jaton'ny haavon'ny 2019, izay avo indrindra hatramin'ny fototra nanombohan'ny areti-mandringana.
Ny mifanohitra amin'izany dia marina amin'ny fitsangatsanganana orinasa sy iraisam-pirenena, izay mbola ambany lavitra noho ny 80 isan-jato hatramin'ny 2019. Ireo ampahan'ny tsena ireo dia tsy ho tafarina alohan'ny 2023.
Ny fahaverezan'ny dia ataon'ny orinasa dia fanamby lehibe ho an'ny seranam-piaramanidina manompo manontolo andro, satria miankina amin'ny mpanjifa be vola no manome mihoatra ny antsasaky ny tombom-bidin'izy ireo ary ampahatelon'ny vola miditra amin'ny toekarena lehibe toa an'i Etazonia. Mba hanonerana ny fahaverezan'ny orinasa sy ny mpandeha iraisampirenena dia manomboka mivarotra serivisy bebe kokoa ireo mpitatitra asa feno a la carte, kendrena amina ivon-toeran'ny mpanjifa misimisy kokoa misy filàna samihafa ary tsy dia vonona ny handoa.
Ny fandalinana ny angon-drakitry ny departemanta amerikana dia nanambara ny fidiram-bola isaky ny kilometatra azo ampiasaina (RASM) ho an'ny seranam-piaramanidina feno dia latsaka 50 isan-jato isan-taona isan-telovolana tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2020, ka nahatonga azy io ho iray amin'ireo fotoana maizina indrindra ho an'ireo mpitatitra amerikana. Mandritra izany fotoana izany, ny RASM ho an'ny kaompaniam-piaramanidina lafo dia nidina 23 isan-jato tao anatin'izay telo volana izay. Ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2020 dia nampifanakaiky ny zava-bitan'ireo vondrona kaompaniam-pitaterana roa tonta, miaraka amin'ireo mpitatitra serivisy feno 45% ary ny 38% kosa ireo mpitatitra mora vidina.
Ny fiverenana mitsangatsangana ankapobeny dia miankina amin'ny fomba haingana fanaovana vaksiny ny firenena sy hanarahan'izy ireo fenitra ny paikadim-pitsangatsanganana momba ny pasipaoro sy ny fitsipiky ny fitiliana, saingy eto ny fangatahana dia.
Ireo mpandeha MENA vonona hanao vaksiny raha vantany vao misy ny vaksinin'ny COVID-19